आधुनिक रामको वनवास - परिहास - नेपाल
आधुनिक रामको वनवास
हाम्रा पूर्वराष्ट्रपति आफ्नो नाम सार्थक बनाएको बनायै छन् । उनी पदमा छँदा पनि हाम्रो देशमा थोरबहुत रामराज्य नै थियो । सत्ययुगका रामजस्तै मृदुभाषी, अल्पभाषी त थिए नै, ऊबेलाका रामले जेजे गरे, त्यही त्यही गर्न उनले कोसिस गरे, गरिरहेकै छन् । सत्ययुगका रामले १४ वर्ष वनमा बिताए, कलियुगका राम पनि वनवास नै बस्न लालायित छन् । नपत्याएको ? अहिले उनी आफ्नो राममहल छाडेर, अनेक कष्ट सहेर भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । भाडाको विषयलाई लिएर घरबेटीको किचकिच, डेरावालाका लागि वनको कुनै काँडाभन्दा कम हुन्छ ? पटक–पटकको ताकेता, चेतावनीपूर्ण सूचना, सरकारले गरेको बेवास्ता वनमा भोग्नुपर्ने दु:खभन्दा कम्ती हो ? तर, यस्ता असंख्य दु:खको बेवास्ता गर्दै उनी वनवासमा छन् । न पत्नीमोहमा लिप्त कुनै दशरथ, न त कैकेयी माता, चाहेको भए उनले आफ्नै महलमा सुखभोग गर्न सक्थे । कठै !